I-LG ibeka esweni i-intshi ezingama-43 ngemisebenzi emangalisayo | Ndisuka mac
I-LG yazisa ngesilumkiso esine-intshi ezingama-43 ngeempawu ezintle
Inkampani yaseKorea isungule esweni entsha enkulu. Akukho nto inye kwaye akukho nto ingaphantsi kwe-intshi ezingama-43, phambi kwezinye iimveliso ezinje ngoPhillips, ogqiba kwelokuba axhase iMac, nje ukuba iApple iyeke, ubuncinci okomzuzwana, kumabonakude wayo ophawu. Yenzelwe umsebenzisi othile, njengoko ubuncinci obufanelekileyo bubungakanani bekhusi. Isuphavayiza eboniswe namhlanje inetekhnoloji yakutshanje evela kwi-LGIscreen se-IPS, kodwa ikwanazo zonke iintlobo zonxibelelwano kunye nokubonisa ukufikelela kwii-4 zonxibelelwano ngaxeshanye.
Siya kwiindawo ezithile. Sithetha ngomhloli olungileyo we 43 intshi, Uyakwazi ukunyamezela 4K. Njengoko abantakwabo eklasini babandakanywa Itekhnoloji ye-IPS, ethintela ukuvuza kunye nelahleko yokukhanya, into eya kuthoba umgangatho womfanekiso kunye nenkcazo yemibala, ngakumbi kwimibala emnyama. Enye itekhnoloji eya kwamkelwa kakuhle "ngabadlala umdlalo" yi Itekhnoloji yeFreeSync, Ukuvumela iscreen ukuba sihlaziywe rhoqo ukuthintela ijezi okanye ukubamba umfanekiso kancinci. Nangona kunjalo, ukubek'esweni inemisebenzi "yendlu yophawu" efana nale: Indlela yemidlalo, Uzinzo mnyama, kunye nesenzo SUtshintsho olunamandla.
Okwesibini. Bambalwa abagadli kwimarike abaya kubonelela ngoqhagamsheleko oluninzi njengoluhlolo lwe-LG. Sinazo:
I-HDMI ezimbini ezimbini ezinokusebenza kwi-2.0K kwi-4Hz,
I-HDMI ezimbini ezinezisombululo ze-1.4K kwi-4Hz.
Umboniso wePort 1.2a ngesisombululo se-4K kwi-60Hz.
Izibuko elidityanisiweyo le-USB-C elinokuxhasa isignali yeDisplayPort.
Kodwa kwakhona, Singajongana nazo zonke ezi zingeniso kumfanekiso ofanayo, oko kukuthi, ubone zonke ezine kwidesktop enye. Nokuba imifanekiso nganye iyakwazi ukwenza imisebenzi njengomfanekiso ngaphakathi komfanekiso, esiwufumanayo kwiMacOS Sierra. Okokugqibela, isandi sokujonga esweni asinakushiyeka ngasemva. Nyusa izithethi ezibini UHarman Kardon ye-10w.
Asinalo uvavanyo lokusetyenziswa kweliso, kodwa siyathemba ukuba i-LG izakuphumeza uphuculo olwenziwe kwi-4k kunye ne-5k esweni ukunqanda iimpazamo ngenxa yokuphazamiseka, ikakhulu ngenxa yomqondiso we-Wi-Fi. Iinkcukacha zexabiso lazo alaziwa, kodwa ngokwemithombo yolwazi, a Ixabiso phakathi kwama-600 nama-700 eeuros ngokomthombo okwafikelelwa kuwo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-LG yazisa ngesilumkiso esine-intshi ezingama-43 ngeempawu ezintle
I-8x32 Podcast: USomlomo noSiri kaJuni
I-Apple yandisa iwaranti yeApple Watch ukuya kwiminyaka emithathu